Nagarik Shukrabar - ‘सत्य लेख्न डराउनेले किन लेख्नु आत्मकथा ?’
शनिबार, ३० असोज २०७८, ०६ : ११
आइतबार, २४ चैत २०७५, ०१ : ११ | प्रजु पन्त
२०२८ सालको झापा विद्रोहपछि १३ वर्षको उमेरमै कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीति सुरु गरेकी गौरा प्रसाईंले २०६८ मा संस्मरणात्मक कृति ‘मेरा जीवनका पाना’ प्रकाशनमा ल्याइन् । प्रारम्भमा कमैले उनको पुस्तक वास्ता गरे तर ७–८ महिनापछि भने सामान्य पाठकले नै सोधखोज सुरु गरे । कारण थियो, पाठककै प्रचार । उनले आफ्नो पुस्तकमा भूमिगतकै समयमा भारतको कोठीमा बिक्री हुँदाकोे नारकीय जीवनदेखि पञ्चायती सरकारले उमेर बढाएर जेलमा दिएको कठोर यातनासम्म बिनासेन्सर उल्लेख गरेकी थिइन् । पछिल्लो समय राज्यका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुले समेत आत्मकथा र आत्मसंस्मरणको पुस्तक लेख्ने क्रम बढेको छ । कतिपय पुस्तकले झूटको पुलिन्दा भनेर आलोचनासमेत पाए । आत्मकथा तथा आत्मसंस्मरण लेखनको इमान्दारिता र लेखनमा महिला सहभागितामा केन्द्रित भएर प्रसाईंसँग शुक्रवारकर्मी प्रजु पन्तले गरेको संवाद ।
तपाईंंको संस्मरणले नेपाली साहित्यको बजारमा राम्रै तरङ्ग ल्याएको थियो । त्यहाँ लेखिएका सबै सत्य नै हुन् त ?
नढाँटीभन्दा मैले प्रमुख घटना मात्र लेखेकी छु । पुस्तकमा लेखिएका कति सत्य छन् भन्ने भन्दा पनि ममाथि घटेको घटना कति प्रतिशत लेखियो भन्ने प्रश्न चैँ सही होला ।
भन्नुस् न त, कति प्रतिशत लेख्नुभयो ?
पहिल्यै भनेँ नि, प्रमुख घटना मात्र लेखेकी छु ।
लेख्नुको विशेष कारण छ कि, एउटा पुस्तक लेखी हालौँ न भनेर लेख्नु भयो ?
मभित्र औडाहा थियो । रातदिन ममाथि पहिले नै भएका घटनाले डेरा जमाइरहेको थियो । सपनामा पनि त्यही घटनाले मलाई लखेटिरह्यो । त्यही औडाहा मेटाउन पुस्तक लेख्नुपर्छ भन्ने लाग्यो र लेखँे ।
जो कोहीले आफ्ना भित्री कुरा लेख्दा पनि लेख्दैन । त्यसको कारण आफ्नै बानी व्यहोरा गलत छ भने, चरित्र ठीक छैन भने अलग कुरा हो तर आफू सही छ, आफ्ना कुराहरु स्वच्छ छन् भने इमान्दार भएर किन नबताउने ? साँचो कुरालाई किन नलेख्ने ? यस्तै लागेपछि लेखेँ । आफ्ना कुरा बाँडेपछि हलुका होला कि भन्ने लागिरह्यो र लेखेँ ।
प्रायःले आफूमाथि भएका दुव्र्यवहार र दुव्र्यवहार गर्ने मान्छेको नाम लुकाउने चलन छ, तपाईंले भने लेख्नुभयो । त्यसको सत्यताको जाँच कसरी गर्ने ?
मलाई बच्चैदेखि बुबाले कुनै कुरा पनि झूटो बोल्न हुन्न, जे बोल्छौ साँचो र सत्य बोल भन्नुहुन्थ्यो । डराए हार्छ्यौ भन्नुभएको थियो । त्यसले पनि काम गर्यो । दोस्रो कुरा, राजनीतिले पनि मलाई निडर बनायो । मर्नदेखि डराउन हुन्न भन्ने भयो । डर कहिले पनि लागेन । जे कुराले मलाई पोलेको थियो, जुन सत्यले मलाई पोलेको थियो त्यही लेखेँ । जे लेखेँ, त्यसको खण्डन कसैबाट हुन सकेन । सत्यको मापन त्यही नै भयो ।
पार्टी भित्रका ठूलै नेताको व्यवहारबारे पनि खुलेरै लेख्नुभयो । प्रष्टीकरण सोधिएन ?
अहँ, कसैले आँटै गरेन । झूटो लेखेको भए पो सोध्ने त ! यो आत्मसंस्मरण लेख्नेबारे भूमिगत कालमै मैले लक्ष्मण रायमाझीलाई सुनाएकी थिएँ । यो घटना लेखिनुको प्रमुख कारण मेरो चिट्चिटहापन नै प्रमुख कारण थियो । श्रीमान् गोविन्द कोइराला र मेरी जेठी छोरीलाई पनि योजना सुनाएकी थिएँँ । उहाँहरुले मलाई प्रोत्साहित गरेपछि लेखेँ ।
भनाइ नै छ, ‘दुनियाँ साथमा छ तर लोग्ने छैन’ भने संसार जितिन्न तर लोग्ने साथमा छ र संसार साथमा छैन भने आफैँलाई जित्न सहज हुन्छ । श्रीमान्ले नै सहमति जनाएपछि लेख्ने हिम्मत थप बढ्यो । पुस्तक निस्किएपछि विभिन्न प्रतिक्रिया आए । आफैँ संलग्न पार्टीका नेताको पनि नाम थियो तर प्रष्टीकरण भने सोधिएन ।
अहिले खुब आत्मसंस्मरण र आत्मकथाका पुस्तक निस्किरहेका छन् । झूटो लेखेँ भनेर आलोचना पनि भइरहेका छन् । तपार्इंले यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
कतिपयले अरुलाई बगाउन, डुबाउन भनेर लेख्छन् भन्ने थाहा पाइयो । कतिले फँसाए भन्ने पनि सुनियो । मेरो प्रश्न– झूटो लेख्ने भए किन लेख्ने ? आत्मकथा र संस्मरणमा सत्य लेख्न सकिन्न भने बरु नलेखेकै राम्रो ।
मेरै पुस्तकको कुरा गर्ने हो भने पुस्तक निस्किएपछि ‘यस्ता कुरा किन लेखी ? लाज लागेन ?’ समाजमा मुख देखाएर हिँड्न नहुने बनाई, यस्ती रहिछे भनेर अपशब्द बोल्नेदेखि ‘ए यो त यस्ती पो त !’ भनेर हियाउनेसम्म गरे । श्रीमान्लाई त धेरैले त्यस्तीलाई सम्हालेर बसेको रहेछ समेत भने । तर यस्तो भन्ने १ प्रतिशत थिए, ९९ प्रतिशतले सही नै भने ।
१३ वर्षकै उमेरमा ‘झापा विद्रोह’ मा सहभागी हुनुभयो । त्यो बाल्यावस्थाको राजनीतिलाई अहिले ६० वर्षको प्रौढ आँखाले हेर्दा कस्तो लाग्छ ?
ममा सानैबाट विद्रोही चेत रहेछ कि जस्तो लाग्छ । त्यो बेला समाजमा रहेको असमानताको विरोधमा भूमिगत दलहरुले आन्दोलन सुरु गरे । कक्षा आठ पढ्दा नै धेरथोर राजनीतिमा संलग्न हुन थालिसकेकी थिएँ । कम्युनिस्ट पार्टीले सबै बराबर हुन्छन् विभेद गर्नुहुन्न भनेर लुकीलुकी राजनीतिक प्रशिक्षण दिन्थ्यो । त्यसले मलाई आकर्षित ग¥यो । जब घरकाले विवाह गरिदिन्छन् भन्ने भाइबाट थाहा पाएँ, त्यसपछि म भूमिगत भएँ ।
त्यतिबेला मेरो आँट देखेर सबै छक्क पर्थे । हिरासत बस्दा पुलिस पनि छक्क परेका थिए । मलाई त्यतिबेला डर भन्ने फिटिक्कै लाग्दैनथ्यो । जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि मैले मुक्तिको बाटो खोजिरहेँ । जुन दिन म वेश्यालयमा बेचिएँ, त्यतिबेला पनि म यहाँबाट कुनै दिन निस्कन्छु भन्ने आत्मविश्वास थियो, निस्किएँ पनि । साँच्चै त्यतिबेलाको आत्मविश्वास र आँट देखेर म आफैंलाई अचम्म लाग्छ । अहिले सम्झँदा त्यत्रो आँट कसरी आयो होला भनेर आफैँ छक्क पर्छु ।
अब महिलाको उपस्थितिबारे कुरा गरौँ । २०२८ देखि अहिलेसम्म विविध क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति कस्तो देख्नुहुन्छ ?
शिक्षित भएका छन् । जागिरे महिलाहरु बढेका छन् । प्राविधिक क्षेत्रमा कामकाजी बन्नेको संख्या बढेको छ तर सामाजिक तथा राजनीतिक सहभागिता अझै कम छ । अझै पनि बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध घटेको छैन । बुहारी ज्युँदै जलाइएका छन् । राजनीतिक रुपमा आवाजहरु बुलन्द पारिएका छैनन् । निर्णायक तहमा अझै महिलाको उपस्थिति बलियो हुन सकेको छैन ।
पुग्न नसकेका कि नदिएको ?
सजिलोका लागि भन्ने हो भने दिएको छैन भन्दा होला तर यथार्थमा भन्ने हो भने हामीले मुद्दा बिर्सिएका छौँ कि जस्तो लाग्छ । पदमा कसरी पुग्ने भनेर गुटबन्दीमा लाग्नु भएन । पदभन्दा मुद्दा प्रमुख हो । अहिले हामी मुद्दामै अल्मलिएका छौं । प्रत्येक राजनीतिक दलमा महिला संगठन छन्् । कञ्चनपुरमा बालिकाको बलात्कार र हत्या भयो । नेपालगञ्जमा दाइजो नल्याएको निहुँमा ज्युँदै जलाइयो । तर कुन महिला संगठन सडकमा आए ? अब दोष कसलाई दिने ? नेतृत्वमा रहेका महिलाहरु एकीकृत भएर पार्टी नेतृृत्वलाई घेर्नु पर्दैन ? हामीले आफ्ना मुद्दा नै बिर्सियौं ।
घर परिवार समाजले नै महिलाको उन्नति–प्रगतिमा बाधा पारिरहेको छ । घरमा नै सीमित बनाइएको छ भनिन्छ यसमा कत्तिको सत्यता भेट्नुहुन्छ ?
आंशिक सत्यता छ तर पूरै हैन । सामाजिक संरचना नै पुरानो छ । संरचना बदलिएला र अघि बढौँला भन्ने हो भने त्यो दिन आउन्न । हिजो हामी भूमिगत हुँदा सबै ठाउँमा छोरीमान्छेलाई पढाउने चलनसमेत थिएन । बाधा त गर्छ नै तर त्यही निहुँ बनाएर घरमा बस्नु भएन ।
अहिले नागरिकतामा महिलाको उपस्थितिको विषय चर्किरहेको छ, यसमा तपाईंंको धारणा ?
अहिलेको प्रमुख विवाद विदेशीसँग विवाह गरेको महिलाको सन्तानको केस हो क्यारे । पुरुषले विवाह गरेको हकमा तुरुन्तै विदेशी महिलाले नागरिकता पाउने र महिलाले विदेशीसँग विवाह गरेको हकमा विदेशी पुरुषले सहजताको साथ नपाउने भन्ने हुँदैन । बराबरी हुनुपर्छ । लिंगको आधारमा विभेद हुनुहुन्न । पुरुषले विवाह गर्ने विदेशी महिलाको हकमा र महिलाले विवाह गर्ने विदेशी पुरुषको हकमा समान कानुनी प्रावधान हुनुपर्छ ।
नागरिकताकै कुरा, तपाईंले पुस्तकमा कांग्रेस नेतृ शैलजा आचार्यसँग जेलमै भएको रोचक कुरा लेख्नुभएको छ । जसमा शैलजा आचार्यले ‘विवाह नगरे पनि सन्तान जन्माउने अधिकार महिलामा निहित हुन्छ, यस कुरामा सँगैँ लडौँ’ भन्दा तपाईंले ठाडै विरोध गर्नुभयो । अहिले यसप्रतिको तपाईंको धारणा उही छ कि फेरियो ?
हेर्नुस् म गाउँमा हुर्किएकी हुँ । अहिले त आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा महिलाको पहुँच कम छ भने त्यो बेला के हाल होला ? आर्थिक तथा सामाजिक, राजनीतिक पहुँच भएको पुरुषलाई किन दायित्वबाट उम्काउने भन्ने मेरो भनाइ हो । अहिले यहाँ अरु के प्रगति भएको छ र ? जब एउटा नारीले आफूमाथि भएको अन्यायबारे खुलेआम लेख्दा त पत्याइन्न भने अरु कुरा पत्याउँछन् ? कति नेपाली नारी विवाह नगरी स्वतन्त्र भएर बस्न सक्छे ? विवाह नगर्दा त चियोचर्चो बढी हुन्छ भने सन्तानै जन्माउँदा बस्न खान देलान् ?
शैलजाजीले बन्दुक बोकेर पनि हिँड्नुभयो । उपप्रम भएको मान्छे अन्तिम घडीमा उहाँलाई अस्पतालमा कुर्ने मान्छे भएनन् । कोही पुरुष हुन्थ्यो भने त्यस्तो हालत हुन्थ्यो ? उहाँलाई राज्यले पनि हेरेन । यस्तो अवस्थामा म आमा मात्रै भए हुन्छ भन्ने कुरा अहिले पनि स्वीकार्न सक्दिनँ ।